Ịha nhatanha na ịnweta ọgwụ mgbochi yana ndị dike njem nlegharị anya ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ịha nhatanha na ịnweta ọgwụ mgbochi yana ndị dike njem nlegharị anya ụwa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • WTN
Ịha nhata na ịnweta ọgwụ mgbochi COVID-19 nwere ike igbochi mmepe akụ na ụba na mpaghara niile. Saudi Arabia na ndị ndu njem nlegharị anya ụwa ghọtara nke a. FII na -abịa n'izu na -abịa, anya ụwa dị na Riyadh.
Ọdịnihu nke itinye ego (FII) na -achọ izute na Riyadh. Njem nlegharị anya oge a ga -enwe nnukwu akụkụ na mkparịta ụka nke ndị ndu njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
The Network Njem Nleta Ụwa Ahụike na -enweghị oke ala na -echetara Saudi Arabia na ndị nnọchi anya ya gburugburu ụwa na njem agaghị arụ ọrụ ruo mgbe anyị niile nọ nchebe.
Ịnweta ọgwụ mgbochi ahụ ahaghị nhata n'ụwa. Ọ bụ ezie na ụfọdụ mba bara ọgaranya nwere ọgwụ mgbochi oke, mba ndị na -abaghị ọgaranya na -achọsi ike ka ha nye ụmụ amaala ha ọgwụ mgbochi. Ọganihu maka ọtụtụ ụgha na njem na njem.
Ruo Ọktọba 17, na United States, 65% nke ndị mmadụ anatala opekata mpe 1 nke ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, ụfọdụ na-anata ogbugba nke atọ.
30% nke ndị America jụrụ ịgba ọgwụ mgbochi. Gọọmentị na -enye ndị na -agbaso "ndụmọdụ" ịgba ọgwụ mgbochi ahụ ma na -eyi ndị na -agaghị agbaso ntaramahụhụ egwu, dị ka ịhapụ ọrụ ma ọ bụ ịnweta ụlọ oriri.
Na Singapore, ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi bụ 80%, na China 76%, na Japan 76%, Germany 68%na ọnụ ọgụgụ mmadụ jụrụ, Saudi Arabia 68%, UAE 95%, Israel 71%, na India 50%, yana ụwa nkezi ugbu a na 48%.
Ugbu a, ọnọdụ na -esiwanye ike. Russia nwere naanị 35%nke ndị gbara ọgwụ mgbochi, Bahamas 34%, South Africa 23%, Jamaica 19%na nkezi na Africa bụ naanị 7.7%.
Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa, n'okpuru onye isi oche Cuthbert Ncube, sonyere na atụmatụ WTN na Ahụike na -enweghị oke site na mbụ. Otu a ka Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO.
Onye ode akwụkwọ njem nlegharị anya Kenya Najib Balala bụ otu n'ime ndị isi Africa izizi na -akwado atụmatụ Ahụike na -enweghị ala site na WTN. Ọ bụ ugbu a onye minista Africa mbụ na-aza nzaghachi Onye isi ala US Biden na-eme ka izu ike maka ọgwụ mgbochi COVID-19.
Enweghị ịjụ na mba nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala; enwere olile anya inweta ọgwụ zuru oke iji nweta ndị mmadụ ọgwụ mgbochi. Enweghị ụkọ ego na -agbanwe ọgwụ mgbochi na mba ndị bara ọgaranya.
Ndị isi njem nlegharị anya nwere echiche zuru ụwa ọnụ, gụnyere Minista Njem Nleta Bartlett si Jamaica, enyerela aka ịnabata ọnọdụ na ọrụ Saudi Arabia na -arụ dị ka onye isi ihe zuru ụwa ọnụ.
Site na FII na -abịanụ na Riyadh, yana ndị isi njem nlegharị anya 1,000 n'ụgbọ elu ugbu a iji rute Saudi Arabia wee gaa, Minista nkwuwa okwu Bartlett nwere ike rụọ ọrụ pụrụ iche dị ka onye ndu ụwa niile na Riyadh n'izu na -abịa. Ịha nhatanha ọgwụ mgbochi nwere ike dị ya n'obi, n'ịtụle njem nlegharị anya Jamaica.
Network Tourism Network, n'okpuru onye ndu Juergen Steinmetz, matara nke a na mkparịta ụka ya zuru ụwa ọnụ na mbido mbụ wee bido ụzọ. Ahụike Na-enweghị Ala na mbido afọ a iji chetara ụwa na onweghị onye ga -anọ na nchekwa na COVID ruo mgbe onye ọ bụla nọ na nchekwa.
Enweela ọganiihu mana ọ dị nwute na ọkwa a na ọrịa na -efe efe, enweghị ọgwụ mgbochi na -aga n'ihu, ọbụlagodi kesara ihe karịrị ijeri ọgwụ mgbochi 6 n'ụwa niile. Ọtụtụ n'ime ndị a nọ na mba ndị nwere nnukwu ego ebe mba ndị ka daa ogbenye nwere ihe na-erughị otu pasenti nke ndị bi na ya.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, onye nwetakwara aha a Onye dike njem nlegharị anya nke ụwa, maara nke a wee chetara ya eTurboNews na ahaghị ọgwụ mgbochi nwere ike igbochi mgbake zuru ụwa ọnụ.
N'ime nzukọ Kọmitii maka njem nlegharị anya (CITUR), Bartlett agwala atụmatụ gọọmentị Jamaica na mbọ iji belata mmetụta ọjọọ nke ọrịa na mpaghara njem.
Mgbe ole ụwa nke njem na -akpọ 911, alaeze Saudi Arabia anọla ebe ahụ ịza ma nyere aka. Ekenyela ọtụtụ ijeri dọla ka etinye ya na ngalaba a, ọ bụghị naanị na KSA kamakwa gburugburu ụwa. Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Saudi, Maazị Ahmed Aqeel Al-Khateeb, goro onye bụbu onye isi WTTC na Mịnịsta njem nlegharị anya maka Mexico, Gloria Guevara, ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ ya kacha elu. Gloria ghọtara geopolitics ma mara nke ọma na ọnọdụ akụ na ụba dabere na njem, dị ka Caribbean.
Saudi Arabia ka nwere ike ịnwa ibubata isi ụlọ ọrụ UNWTO site na Madrid na Riyadh. A ka nwere ike idobe ụdịrị ndụmọdụ a na UNWTO General Assembly na Morocco. Ma ọ dịkarịa ala, Saudi Arabia erutela Spain, mba ndị ọbịa UNWTO ugbu a, ka ha wee nwee ike rụkọọ ọrụ ọnụ ma weghachite ndị isi na Organisation Njem Nleta nke nwere nkwarụ.
Institutelọ ọrụ itinye ego na -abịa n'ihu na -akwado izute na Riyadh n'izu na -abịa. Ministri njem nlegharị anya nke Saudi kpọrọ ọtụtụ narị ndị ndu njem ka ha soro na nzukọ a.
Ịha nhatanha na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ụwa niile bụ ihe egwu maka ịmalitegharị ọganihu nke ngalaba a, maka mmepe ọrụ, na ọganihu.
Ndị njem gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike ịhọrọ ebe a na -agbakwa ọgwụ mgbochi ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ na ndị ọrụ njem ndị ọzọ. Otu na -aga n'ụzọ ọzọ. Ndị ọrụ ụlọ oriri na ọ wantsụ wantsụ chọrọ ijide n'aka na ọ nweghị nchekwa na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ha achọghị ka ha na ndị ọbịa si mba ọzọ na -emekọrịta ihe ma ọ bụrụ na etinyeghị ọgwụ mgbochi.
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ego kpatara mba enweghị akụrụngwa na ohere ịgba ọgwụ mgbochi a, nke a bụ ọnọdụ obodo ndị njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nwere ike gbakọta ọnụ wee nyere ibe ha aka. Saudi Arabia nwere ike rụọ ọrụ ya dị ka onye ndu ụwa ọhụrụ e guzobere ọhụrụ nwere echiche mepere emepe na nke ọhụrụ, iji kwado na ịgbatị ego na ụdị atụmatụ a. Saudi Arabia ga -apụta n'ezie dị ka dike ụwa ma ọ bụrụ na ọ ga -aga nke ọma.
Ntinye ego dị otú ahụ na ịnweta ọgwụ mgbochi nha anya ga -enwe ike inwe nnukwu nkwụghachi ụgwọ maka Saudi Arabia na usoro ọkara.
Ya mere, nzukọ FII na -adịwanye mkpa kwa ụbọchị.